Faah-faahino kasoo baxaya dagaal culus oo caawa ka dhacay degmada Marka – Hornafrik Media Network
Faah-faahino kasoo baxaya dagaal culus oo caawa ka dhacay degmada Marka
By Liibaan Nuur	 On Jan 19, 2020
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa salaadii makhrib ee caawa kadib waxay weerar ku bilaawday qaraxyo ku qaadeen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose.
Wararkii ugu dambeeyey aan ka heleyno Marka waxa ay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaaladaas ay iska caabiyeen weerarka ay ku soo qaadeen Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa dhowr jiho ka soo weeraray magaalada, waxuuna dagaalka xoogiisu ka dhacay dhinaca bari ee magaalada, gaar ahaan xaafadaha Buulo-bacaad, Rusiya, kawaanka Malaayga iyo goobo kale oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan guutada 14-ka October.
Dad ku sugan magaalada Marka ayaa noo sheegay in goor dhaw uu joogsaday dagaalku, haatana rasaas goos-goos ah laga maqlayo qeybo ka tirsan magaalada, gaar ahaan goobihii lagu dagaalamay, taas oo ay ridayaan ciidamada dowladda.
Sida ay noo sheegeen goobjoogayaasha ku sugan magaalada Marka kooxihii weerarka soo qaaday oo markii hore dagaal ku galay qeybo ka tirsan magaalada ayaa dib uga laabtay, kadib markii ay iska cabin kala kulmeen ciidanka militeriga Soomaaliya ee guutada 14-ka October, kuwaas oo ka howlgala degmada Marka iyo tuulooyinka hoos taga.
Taliyaha ururka 4-aad ee guutada 14-ka October Dhamme Cusmaan Maxamed Muuse ayaa warbaahinta codka ciidamada qalabka sida u sheegay, inay dagaalka caawa ka dhacay magaalada Marka Al-Shabaab uga dileen sideed dagaalame, 11 kalena ay uga dhaawaceen.
Sidoo kale Taliyaha ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerarkaas oo uu ku tilmaamay mid ay Al-Shabaab ku doonayeen inay kula wareegaan magaalada, dhankoodana ma uusan sheegin khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaas.
Akhriso: Liiska xildhibaanada Galmudug ee garabka Xaaf oo caawa la shaaciyey
Galmudug: Qaar ka mid ah musharaxiinta oo dalbaday in la fuliyo toddoba qodob